Telefoonka Gacanta oo Daba-qoodhi Noqday – Rasaasa News
Mar 26, 2014 Etiopia, Huwei, Internet, ZTE
Hayada aduunka u qaabilsan ilaalinta xuquuqda dadku, waxay shalay daabacday warbixin dheer oo ku saabsan sida xun ee ay Atobiya u adeegsato isgaadhsiinta casriga ah.
Hayadu waxay sheegtay in dawlada Atobiya ay adeegsanayso Isgaadhsiin shisheeyey si ay dadkeeda u waxyeelayso. Kalsooni darada ay dawlada Atobiya ku qabto dadkeeda waxay ku kalifaysa in ay cabudhiso oo ay si walba ula socoto sheekadooda iyo waxa ay samaynayaan.
Arinta ay qortay Hayada Xuquuqda Dadku ma ah mid hada bilaabatay, ee waxay jirtay tan iyo intii ururka TPLF (Tigray) qabsaday awooda dalka Atobiya. Waxaa telefoon dartii lagu xidhay in ka badan kumanaan ruux oo reer Atobiya ah.
Dadka Somalida oo si xad dhaaf ah u isticmaalka adeega telefoonka iyo internet-ka ee shirkada isgaadhsiinta Atobiya, ayey shirkadu ka heshaa lacagta ugu badan (Ethiopian telecommunication corperation).
Hadana waxay yihiin dadka ugu xidhiga badan Atobiya [4.5/91 mln], waxaana la sheegaa in Jeel Ogadeen oo kaliya ay ku jiraan 5,000 oo maxbuus. Dadka xidhan ma oga sababta ay u xidhan yihiin, lamana geeyo maxkamad, kuligoodna waxay ku eedaysan yihiin ka tirsane ONLF.
Labada shirkadood ee Shiinaha ah, ee sida gaarka ah loogu eedeeyey uruurinta xogaha dadka isticmaalaya telefoonada iyo internet-ka ayaa kala ah ZTE, HUAWEI, kuwaas oo ah kuwa kaliya ee bixiya adeega Internetka.
Sida ay ka digtay Hayada xuquuqda dadku, waxaa khatar ku jira kumanaan degan dalka iyo dibadaba, kuwaas oo si dhib yar loo helo xogtooda.
Internet-ka oo ah meesh ugu badan xadh lagu muto ayaa badankiisu ka xidhan Atobiya. Internet-yada ka soo jeeda Degaanka Somalida Ogadeeniya ee hawada ku jira waxay ka badan yihiin 30 bogg, waxaana furan saddex ka mid ah. Dadka awooda waxay Internet-ka ku isticmaalaan USB ay bixiso adeegiisa ZTE.
Cidii isticmaasha Daba-qoodhi ZTE USB, oo gasha mid ka mid ah boggag innternet-ka, iyada oo isticmaalaysa hab kale, waaxay mudan xadhiga aan markhaati u baahnayn. Waxaa kale oo aad xadhig gali kartaa hadii aad isticmaasho Telefoon guri, ama Mobile ku hadal ama internet ka gal.
Horeba iyada oo ay dadku u ogaayeen dhibaatada xadhig ee ay Isgaadhsiintu leedahay, ayaa haatan waxaa si caalami ah uga digay daboqoodhinimada Telephone-ka hayada xuquuqda dadka.
Boggaga Internet-ka ee Degaanka Somalida Ogadeeniya
Ogadentoday.com, Ogadennet.com, Ogaden24.com, Ogadentv.com, Ogadenhumanrights.org, Ogadenonline.com, Shilaabonews.com, Qoraheyonline.com, Doollo.com, Danood.com, Afdheer.com, Somalistate.com, Rasaasa.com, Danwaanews.com, Nogobnews.com, Ogadenca.org, marsinonline.com, Shekosh.com, Radiojijiga.com, xogtashacabka.com, Faallo.com, cakaaranews.com, Ogadennews.com, Raasonews24.com, Cakaaranews.org
Kaniisada iyo Kuliyada,